Fanomezana vola amin'ny mailaka Newsletter: Safidy roa azo atao ho an'ireo bilaogera sy mpanonta micro
Fanomezana vola amin'ny mailaka Newsletter: Safidy roa azo atao ho an'ireo bilaogera sy mpanonta kely
Talata, Aprily 10, 2012 Alatsinainy Desambra 17, 2018 Scott Hardigree
Tsy ny sehatra mitaona irery intsony ny sehatry ny mpanonta be. Ny avolava sy ny dolara marketing dia avily lalana mankany amin'ny tafika misy mpampanonta bitika kely; na ireo mpanara-maso atiny, bilaogera, vloggers, na podcasters.
Noho ny fitomboan'ny fangatahana, ireo mpampanonta bitika ireo dia mitady fomba tsara ahazoana tombony amin'ny mpihaino azy ireo, sy ny ezak'izy ireo.
Tombom-barotra amin'ny Gazety amin'ny mailaka
Miaraka amin'ireo paikady fanodikodinam-bola ampiasain'izy ireo ankehitriny, toy ny dokambarotra fampirantiana tranokala sy ny fanohanan'ny media sosialy, ny mpanonta manokana amin'izao fotoana izao dia manana safidy roa mendrika homena ihany koa ny taratasim-bolany.
Ny fananganana vola amin'ny fananana mailaka an'ny mpanonta dia tsy zava-baovao fa hatramin'ny vao tsy ela akory izay dia nisy sakana lehibe, toy ny haben'ny lisitra farafahakeliny, izay nanilika ireo mpitory kely tsy handray anjara.
Mitovy amin'ny masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka feno miaraka am-pitiavana hamoaka, dia nampiasa tetika maromaro izahay hanampiana ireo bilaogera hampitombo ny vola miditra amin'ny mailaka - tsy mila mivarotra mivantana na hampitombo ny asany. Ireto misy roa amin'ireo ankafizinay:
Doka ao amin'ny Gazety mailaka
Hitanay fa ny doka an-tsehatra, voafono anaty mailaka na manodidina, dia mpanakanto matanjaka mifandraika amin'ny vidiny; ho an'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpanonta.
Martech Zone mampiasa iray amin'ireo tambajotra doka mailaka lehibe indrindra, LiveIntent, hametrahana ny volam-baniny.
Gazety hacker, izay navoakan'i Kale Davis, nipaipaika LaunchBit hampiditra dokambarotra tokana isaky ny bilaogy. Kale dia mampiasa MailChimp ho mpanome tolotra mailaka azy izay mifamatotra amin'ny LaunchBit; mahatonga ny fifantenana doka mora ary mandeha ho azy ny tsindrona.
Mifanohitra amin'izany, Dan Lewis amin'ny Fantatro izao mampiseho doka maro ao amin'ny bilaoginy. Dan mampiasa LiveIntent ary koa ny LaunchBit. Ireo roa ireo koa dia mifamatotra mafy amin'ny mpanome tolotra mailaka azy.
Mailaka tohana (na fanofana lisitry ny mailaka)
Ny habaka fanofana lisitra mailaka dia niova tato anatin'ny taona vitsivitsy, ho lasa tsara kokoa. Aza diso hevitra aho, mbola misy ny lisitr'ireo orinasa lisitra manofa, na mivarotra lisitra mailaka tsy misy dikany aza, saingy marina ihany koa fa ny manofa lisitra mailaka tena izy dia manohy mpanao. Na eo aza izany, maro ny mpitory kely no tsy sahy mihevitra ny fanofana lisitra mailaka ho toy ny paikadim-bola.
Angamba izany dia satria ny mpampanonta niche dia manana fifandraisana akaiky kokoa sy manokana amin'ireo mpanjifany ary tsy te-ho toy ny mpanan-karena. Angamba tsy fahampiana fahatakarana fanofana lisitra inona tena tamin'ny fototra no mitarika.
Na angamba ny stigma an'ny anarana fotsiny no mamono ny mpanonta vaovao. Raha tokony ho ny "fanofana lisitry ny mailaka" dia nantsoinay foana hoe Email Manohana na Email natokana izay, rehefa heverina fa fonosina amin'ny maodelin'ny mailaka ho an'ny mpanonta ny tolotra ataon'ny mpanonta dia mety kokoa.
Ity misy mailaka tohanan'ny DailyWorth; famoahana izay manome torohevitra azo ampiharina amin'ny vola manokana isan'andro ho an'ny vehivavy. Amin'ity ohatra ity dia ShoeMint ilay mpanao dokambarotra.
Ity ambany ity dia ohatra iray avy amin'ny Wilson Web, izay mamoaka Marketing amin'ny Internet ankehitriny gazety iray izay misy ecommerce, marketing amin'ny mailaka ary toro-hevitra momba ny marketing amin'ny tranokala. I Lyris, mpanao dokambarotra, mpanome tolotra mailaka mailaka.
Raha ny zavatra niainako, ireo orinasam-pitantanana ny lisitry ny mailaka anio dia tena miasa tsara amin'ny fampifanarahana ireo mpanao dokam-barotra amin'ireo mpihaino manokana. Nandroso koa ny haitao sy ny tsena ahafahan'ny mpanao doka, na ny mpivarotra lisitra ataon'izy ireo, manofa lisitra mora foana, manatanteraka fampielezan-kevitra ary manatanteraka ny zava-bita.
Inona avy ireo andraikitry ny mpanonta?
Ny tambajotra fampisehoana mailaka sy ny orinasan-tranonkala fanofana lisitry ny mailaka dia mahatonga ny fanangonam-bola ho mora ho an'ny mpanonta. Manomboka amin'ny fikarohana sy ny varotra ka hatramin'ny fanaovana tatitra sy fandoavambola, dia vitany daholo izany rehetra izany.
Ny andraikitry ny mpampanonta izay mitohy dia voafetra amin'ny fisafidianana / fankatoavana ny doka / tolotr'ilay dokam-barotra ary ny fanohizany ny fifanaovan'ireo mpamandrika.
Ohatrinona ny vinan'ny mpanonta?
Doka fampisehoana mailaka -Ny doka fampisehoana mailaka dia matetika vidina amin'ny base fampisehoana, toy ny vidin'ny isan-tsindry na vidiny isaky ny fahatsapana, noho izany ny fandrefesana fampiasa matetika amin'ny famolavolana sy fanaovana kajy ny vola miditra dia mahomby isaky ny arivo na eCPM. Ny eCPM dia mikajiana amin'ny fizarana ny vola azony amin'ny isan'ny fahatsapana an'arivony. Rehefa nanontaniana momba ny eCPMs antonony i Elizabeth Yin, mpiara-manorina ao amin'ny LaunchBit, dia nilaza fa “misy elanelana maromaro, manomboka amin'ny dolara roa ka hatramin'ny $ 100 eCPM (misokatra).” Notohizany fa "ny taratasim-baovao tsara indrindra toa Thrillist, izay mivarotra ny fitehirizany manokana, dia mahazo $ 275 eCPM arakaraka ny endrika doka. ”
Mailaka natokana -Ny mailaka voatokana dia matetika no vidiana amin'ny a fototra isam-bola, na CPM, midika izany fa mahazo sanda fisaka isaky ny mailaka an'arivony nalefa ny mpanonta, miampy sarany fanampiny ho an'ny tanjona kendren'ny dokam-barotra. Tsy mifamatotra amin'ny fampisehoana ny fandoavam-bola, na izany aza ny lisitra tsy mahomby dia hampidinin'ny orinasa mpanofa lisitra mendrika ny sira. Ny mailaka voatokana dia eo ho eo $ 80- $ 250 CPM, araka ny Worldata's Lisitry ny vidin'ny lisitra, miaraka amina lisitry ny mailaka fandraharahana sy raharaham-barotra iraisam-pirenena mihoatry ny 400 $ CPM. Miorina amin'ny isa amin'izao fotoana izao, ny fandoavam-bola amin'ny mailaka natokana na tohanana dia lehibe kokoa noho ny doka fampisehoana mailaka, fa ny mpitory mieritreritra kosa dia mifantina amin'ny fomba andefasana ireo mailaka natokana ireo; noho izany dia vitsy kokoa ny fotoana ahazoanao tombony amin'ny fanofana lisitry ny mailaka.
Mizara roa -Samy miasa amin'ny sehatra fampisehoana ireo tambajotran-doka fampirantiana mailaka sy ireo orinasa mpanofa lisitry ny mailaka; midika izany fa tsy misy sarany amin'ny mpampanonta, fa kosa mizara tsotra ny vola azo avy amin'ilay mpanao dokambarotra. Ohatra, amin'ny fanofana lisitry ny mailaka, ny mpamoaka dia mitazona 50% -80% isaky ny lisitry ny fanofana lisitra. Ny fizarazaran'ny vola miditra amin'ny doka fampisehoana mailaka kosa dia somary sarotra kokoa ny mamintina azy.
Raha be fangatahana ny mpihaino anao dia azonao atao ny mahazo karama amin'ny fidirana ao. Azonao atao ny mivarotra foana ny lisitr'ireo mailakao manokana, fa ny traikefa dia naneho ahy fa mety hahazo vola kely ianao rehefa miasa mafy kokoa ho azy. Indrindra ao amin'ny tontolon'ny fanofana lisitry ny mailaka.
Arakaraka ny tsenan'ny mpanonta kely mahomby ny tenany, dia hitombo ny fangatahana amin'ny atiny. Io indray dia hitarika ny fitomboan'ny lisitra, izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny fomba mivantana sy ankolaka, tsy maninona raha misafidy ny hampiasa doka tohana, mailaka tohana, na fomba hafa izy ireo.
Milaza aho fa ny mpitory be atao dia mety ho tsara kokoa amin'ny famelana ny fanodikodinam-bola ankolaka ho an'ireo matihanina ary hizaha toetra ny tetika rehetra mety amin'ny mpihaino. Inona no lazainao?
Tags: mailaka Marketinglaunchbitmivantanampitory
Scott Hardigree dia CEO ao Indiemark, masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny serivisy sy consultancy miorina ao Orlando, FL.
Scott dia azo jerena ao amin'ny scott@indiemark.com.
Mampiasa haino aman-jery sosialy mba hambolena ny hetsika manaraka
Apr 18, 2012 amin'ny 7: 23 AM
Mamolavola ny mailaka voalohany aho ary ity dia fampahalalana tena tsara azoko ampiasaina. Misaotra.